डन्डिफोर किन आउँछ ? बच्नलाई गर्नुहोस् यी उपाय | Kendrabindu Nepal Online News
33683835 1008525 7685811 24989499
76258 491 20396 55371
डन्डिफोर किन आउँछ ? बच्नलाई गर्नुहोस् यी उपाय
२९ जेष्ठ २०७६, बुधबार १७:०३
अनुहारमा डन्डिफोर आउनु कुनै अनौठो कुरा होइन । यो साधारण कुरा हो । तर डन्डिफोर आएपछि दाग बस्नु साधारण कुरा होइन । यसमा तपाई आफैं जिम्मेवार हुनुहुन्छ । डन्डिफोर आउनु, एक्ने आउनु (दाग आउनु) मा हामी आफ्नो छालालाई दोष दिन्छौ ।
आफ्नो डाइटलाई दोष दिन्छौ । एक्ने हुनुको पछाडि केवल यि दुईवटा मात्र कारण हुँदैन् । यसको पछाडि धेरै कारणहरु जिम्मवार हुन्छ जुन हाम्रो सोच भन्दा टाढा छ । हाम्रो अनुहारमा डन्डिफोर आउने कारणहरु के के हुन त ?
के तपाई घण्टौसम्म मोबाइलमा झुण्डिरहनुहुन्छ ? लामो समयसम्म मोबाइल फोनको सम्पर्कमा रहँदा अनुहारबाट चिल्लो निस्कन्छ । मोबाइलमा भएको ब्याक्टेरिया तेलमा टाँसिन्छ र छालामा जम्मा भएर बस्छ । र डन्डिफोर निस्कन्छ । यहि नै एक्नेको कारण बन्न सक्छ । यसकारण मोबाइल फोनको प्रयोगपछि टिस्युले अनुहार पुस्न नभुल्नुहोस् ।
धेरैजसो हेयर प्रोडक्ट कडा र चिल्लो हुन्छ । जब हामी सुतिरहेका हुन्छौ, तब हाम्रो छालाको सम्पर्कमा आउँछ । छालाको रोमछिद्र बन्द गरिदिन्छ । र एक्नेको समस्या हुन्छ । कपालमा जे लगाउँछौ सिधैं त्यो अनुहारमा आउँछ । त्यसकारण ओयल फ्रि प्रोडक्टको प्रयोग गर्नुपर्छ । अनुहारमा डन्डिफोर आउनुमा कपालको कारण पनि हुन सक्छ । लामो कपाल छ भने अनुहारमा आउँछ । जसले गर्दा अनुहारको छालाको रोमछिद्र बन्द गरिदिन्छ ।
हातले अनुहार रगड्नुः
प्रायको अनुहारमा हातले छोइरहने बानी हुन्छ । हाम्रो हात फोहोर र किटाणुले भरिएको हुन्छ । जब हामी आफ्नो हातले अनुहारमा छुन्छौ । किटाणुको हमला सिधैं हाम्रो छालाको रोमछिद्रमा पर्छ । जसबाट डन्डिफोरको समस्या निम्तिन सक्छ ।
तपाई अचम्ममा पर्नुभयो होला । पानी पनि तपाईको अनुहारमा डन्डिफोर आउने कारण बन्न सक्छ भनेर । केहि हदसम्म पानी पनि डन्डिफोरको जिम्मेवार हुन्छ । यदि तपाई हार्ड वाटर (कडा पानी) को प्रयोग गर्नुहुन्छ । तपाईको अनुहारमा केमिकल रेसिड्यु छोड्दिन्छ । जसकारण डन्डिफोर आउँछ ।
धेरैको टूथपेष्टमा ध्यान जाँदैन । कस्तो किसिमको टूथपेष्ट प्रयोग गर्ने वा कस्तो किसिमको आफुले प्रयोग गरिहेका छौ त्यति वास्ता पनि गर्दैनौ । केहि टूथपेष्टमा फ्लोराइड हुन्छ, जसले एक्ने पैदा गर्छ । यसको साथै सोडियम लोरियल सल्फेटले छाला पोल्छ ।
के तपाईले याद गर्नु भएको छ ? तपाई यात्रामा निस्कनुभएको बेला अनुहारमा डन्डिफोर आउँछ । खासमा मौसम, पानी र खानेकुराको बदलावका कारण अनुहारमा डन्डिफोर आउँछ । यदि तपाई फ्लाइटबाट यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको छाला धेरै कम आद्र वातावरणको सम्पर्कमा आउँछ । जसकारण आयल ग्रन्थीबाट धेरै तेल निस्कन्छ र डन्डिफोर आउँछ ।
Prevसुर्खेतमा टिपरको ठक्करबाट पत्रकारको मृत्यु, ब्याक गरेर किचेको आरोप
आयषुका संगीत शिक्षक भन्छन्, ‘उनी साह्रै चकचके थिए’ (भिडियोमा)Next
बोलेरोको ठक्करबाट एककाे मृत्यु
बालिका बलात्कार गर्ने २ जना पक्राउ
१५ मिनेटमै कोरोना पत्ता लगाउने प्रविधि आउँदैदेखि यस वर्षको इपीएस परीक्षा नहुनेसम्म (भिडियोसहित)
अज्ञात समूहले गरे २ दर्जनभन्दा बढी चिहानकाे उत्खनन्
ब्रोइलरका चल्लालाई मेहेन्दी लगाउँदा...!
केन्द्रबिन्दु एक्सप्रेसमा आजका मूख्य खबर(भिडियोसहित)